नोभेम्बर | 2009 | manka kura
Archive for नोभेम्बर, 2009
नोभेम्बर 30, 2009
मैले अमेरिकाकेा एरिजेाना स्टेटकेा टुसानमा वस्दा त्यहां देखेका भेागेका, अनि विकास निर्माणका रामा्कुराहरूवारे वसिवियालेा शिर्षक दिएर केहि लेख्ने प् यत्न गरेकेा थिए । त्यसै लेख संग्रह मध्येावाट अाज पाठकहरू सामु येा लेख राख्ने केाशिस गरेकेा छु । यहांहरूलार्इ कस्तेा लाग्छ अमूल्य सुझाव दिनु हेाला । येा लेख मैले उतै वस्दा ०३।१७।००९ मा लेखेकेा हुं ।
म पहिलेा पटक एरिजेानाकेा टुसान शहरमा जुन २००७ केा राती अार्इपुगेकेा थिए । भेालीपल्ट विहान केाठा वाहिरकेा दक्षिणा फर्केकेा वार्दलीवाट हेर्दा छ, सात जना खाइलाग्दा केटाहरू गाडी पार्किङग गर्ने ठाउंमा गफमा व्यस्त थिए । तीनिहरूलार्इ देखेपछि येा एपार्टमेन्टमा त अरू नेपालीहरू पनि वस्दा रहेछन्र जस्तेा लाग्येा । ललितपुर पाटनतिरका नेवार जस्ता लाग्ने ती केटाहरू पक्कै पनि नेपालकै हेालान्र । भित्र रहेकी वहिनी विनितालार्इ मैले ढेाकावाटै सेाधें । ती वाहिर रहेका केटाहरू त नेपाली जस्तै छन्र, कहांका हुन्र भनेर सेाधे । उनले हांसेर भनिन्र कहां हुनु नेपाली , ती त मेक्सीकन केटाहरू पेा हुन्र । सांच्चै मेक्सीकनहरू हेर्दा काटीकुटी नेपाली जस्तै लाग्छन्र ।
म अाफनेा काम नभएकेा समय दिन विताउन अथवा जाडेा र गर्मी छल्न प्ाय डाउनटाउनकेा मूख्य चेाकमै रहेकेा तीन तले पीमा काउन्टी पव्लीक लाइवे्अरीमा जान्थे । त्यहां वस्दा छुटैृ किसिमकेा अानन्द प्ाप्त हुन्थ्रयेा । प्ाय म त्यहां एरिजेानाकेा इतिहास सम्वन्धी पुस्तकहरू खेाजेर हेर्ने गर्थे । त्यसवेला पुस्तकालयले एरिजेाना सम्वन्धी अाफना कलेक्सनका पुस्तकहरू राखेकेा थियेा । मैले प्ाप्त गरेकेा एरिजेाना वारे लेखिएकेा पुस्तकमा एरिजेानामा रहेका मेक्सीकनहरू एशिएन जातीका मुलका मानिसहरू हुन्र भनेर लेखेकेा पढ्रन पाएकेा थिए । रहंदा वस्दा मलार्इ मेक्सीकनका धेरै कुराहरू एशिएन जातीमा पनि नेपालीसंग मिल्देा जुल्देा लाग्थ्रयेा । तीनिहरू काटीकुटी नेपाली जस्तै लाग्थे । पछि गएर मैले लाइ्वे्अरीमा त्येा पुस्तक खेाजेर त्यसकेा लेखक ,प् काशन मिति अादि टिप्न खेाजे तर सेा पुस्तक प्ाप्त हुनै सकेन ।
मेक्सीकन पुरूषहरू अलि अग्ला हुन्र की तर अाइमार्इहरू सरदर नेपालीकै कदका देखिन्छन्र । यिनीहरू गेारेा र गहुंगेारेा वर्णका देखिन्छन्र ।यिनिहरूकेा कपाल जन्मजातै कालेा छ । अाखा कालेा छ । अांखामा कालै हुने गरि गाजल लगाउंछन्र । चांदि जस्तेा धातूकेा चुरा हातमा लगाउंछन्र । लेाग्ने मानिस, स्वास्नीमानिस दुवैले सिकि् लगाएकेा पाइन्छ । कान छेडेर सेता गहना र कतिले लस्करे मुन्दा् लगाउंछन्र । लेाग्ने मान्छे प्ाय सवैले जुंगा पालेका हुन्छन्र । यिनीहरू टी शर्ट र प्यान्ट र चुच्चे परेका छालाका जुत्ता अनि कम्मरमा पेटी लगाएकेा देखिन्छन्र । मेक्सीकनहरूले नेपाली केटा वा केटी र नेपालीले मेक्सीकन केटा वा केटी लिएर संगै हिडेकेा अवस्थाम छुट्रयाइहाल्न पनि गाहे्ा पर्छ ।
प्ाय सवै मेक्सीकनहरूले हामीलार्इ मेक्सीकननै ठान्दछन्र । यीनिहरू स्पानिस भाषा वेाल्दछन्र । हामीहरूसंग भेट्रदा उनीहरू स्पानीस भाषामा नै कुरा गर्न खेाज्दछन्र । म मेक्सीकन हेार्इन भन्दा पनि अलि पत्यार्इ हाल्दैनन्र । एपार्टमेन्ट भीत्र रहेका मेक्सीकनहरू नेपाली जस्तै प्ाय एकठाउंमा भेला भएर गफ गर्ने , कुराकानी गर्ने गर्दछन्र । प्ाय पुरूषहरू पनि कामवाट फर्केपछि समुहमा वसेर गफ गर्ने ,खाने रमार्इलेा गर्ने गर्दारहेछन्र । मेक्सीकन स साना केटाकेटीहरू पनि सामुहिक रूपमा भेला भएर विभिन्न खेलहरू खेलिरहेका देखिन्छन्र ।
यिनीहरूकेा खाना पनि हामीसंग केही मिल्दा जुल्दा देखिन्छन्र । रेाटीमा मासुका स साना टुका् पारेर हाली टेारटाज वनाउने, सिमि, गेडागुडी अादिलार्इ उसिनेर रेाटीमा राखि वेरेर खाने विनवुरितेा , हरियेा खेार्सानीलार्इ टुका् टुका् पारेर विभिन्न परिकारमा राखेर पिरेा पारेर खाने । तामा क्यात्तुके, केराकेा वुंगेा अादिकेा प् येाग र मकैकेा खेास्टामा मकैकेा पिठेा राखि उसिनेर वनाएकेा तमाली का परिकार पनि खांदा रहेछन्र ।
स्टेारमा अाउंदा पनि अाफुभन्दा मान्यजन वा पाकाहरूकेा पैसा अाफुले तीर्न खेाज्ने, तिरी दिने। अाफना परिवारहरूकेा वीचमा वढी भेटघाट र जमघट गर्ने । हिंडडुल गर्दा पनि परिवार सहित सामुहीक भएर हिंड्रने गरेकेा पाइन्छ । वसेकेा ठाउंमा पनि अाफन्तहरू भेटघाट गर्न अाउने जाने गर्दा रहेछन्र ।
वेालचाल र चिनजान नभएका केाही नेपाली झट्र भेट्रयैा भने पनि शुरूमा हामी एक अर्काले मेक्सीकन पेा हेा की भन्ठान्छैा । यस्ता कति घटनाहरू स्टेारमा घटेका छन्र । एकदिन म र अर्का नेपाली संगै स्टेरमा काम गरिरहेका थियैा । एकजना कस्टमर अाएर के के भन्दै थिए । त्यस समय हामी दुवै जना काममा व्यस्त थियैा । अर्का साथीले नेपालीवाट मलाइ, के भन्छ येा भैरे , हेर्नुस त के भनेका थिए , ती त जीम सेामा अाएका नेपाली कस्टमर रहेछन्र । उनले पनि हामीलार्इ मेक्सीकन ठानी केही नवेालेका रहेछन्र । हामीले नेपाली वेालेकेा सुनेपिछ । अाश्चर्य मान्दै तपाइहरू नेपाली पेा हुनुहुदेा रहेछ भन्दै निकै खुसी भएका थिए । हामी भने त्यतिवेला लाजले भुतुक्कै भयैा ।
एउटा अर्केा घटना अझ रेाचक वनेकेा थियेा । मेरेा काम वेलुका नैा वजे सम्म भएकेाले , मलार्इ लिन स्टेारमा भाइ र अर्का एकजना अर्केा स्टेटवाट त्यसै दिन अार्इपुगेका साथिलार्इ साथ लिएर अाएका थिए । उनी मेरै छिमेकी गाविसका परिचित साथी थिए । उनीहरू स्टेार भित्र पस्दा म पछि रातीकेा सिफ्रटमा काम गर्ने अर्का नेपाली साथी त्यतिवेला रेस्टरूम शैाचालय गएकेा वेला परेछ । हामी वीच भएकेा भलाकुसारी ती साथीले देख्न पाएनन्र । नयां साथी भने स्टेारभित्रै टहलिरहेका थिए । म सिफ्ट वन्द गरि रिपेार्ट हाते कम्पयुटरमा राख्दै थिए । स्टेार भित्र पनि काम गर्ने मानिसहरूमात्र वस्ने चारैतिर घेरिएकेा भित्रिभागकेा एकातिर अडेस लागेर काम गर्दै थिए। नजिकै ती राती काम गर्ने साथी म संगै उभिएर वसेका थिए । हामी उभिए ठीक पछाडी एैनाकेा वारमा नयां साथी उभिएर मैले काम गरिरहेकेा हेरी रहेका रहेछन्र । राती काम गर्ने साथीले ती मेक्सीकन हेा भन्नेठानी नेपालीवाट अामा चकार्दै, साले किन्दा पनि किन्दैन । हामीलार्इ के हेरेर , के खान वस्या हेा येा , चेार्न त अाएकेा हैन भन्दै मलार्इ ए दार्इ येा तपार्इले चिनेकेा गा्हक हेा भनेर ठूलै स्वरमा कराए । कामकेा धुनमा भएकेाले पछाडी केा वसेकेा थियेा मलार्इ पनि थाहा थिएन । म यसेा मुन्टेा वटारेर पछाडी फर्कन्छुत अफनै नेपाली साथी । मैले हत्तारिदैं ए…. के भनेकेा , वहां त हामै् साथी नेपाली हेा नी , तपाइले चिन्नु भएन भनी कराएं । साथीकेा अनुहार रातेा न रातेा भयेा । मलार्इ के थाहा त । म त मेक्सीकन हेाला भन्ठानेकेा । नयां साथीले पनि मेक्सीकननै हेाला भन्ठानेर नवेाली वसेका रहेछन्र । त्यस दिन यसरी दुवै साथीहरू एकले अर्केालार्इ मेक्सीकन ठानेर यस्तेा घटना घटेकेा थियेा । येा विषय धेरै पछिसम्म साथीहरूकेा वीचमा हल्ली खल्ली वनेकेा थियेा । अस्तु ।
नागदह र डुङगा
नोभेम्बर 27, 2009
धार्मीक, सांस्कृतिक र एैतिहासिक सन्दर्भ जेाडिएकेा नागदह अाज भन्दा विसैां वर्ष अघि पुगेकेा र देखेकेा नागदह अहिले सपना जस्तेा लाग्येा र सानेा टांसेा पाठकहरूसामु राख्ने केासिस गरेकेा छु । तपाइहरूले पढि दिनु भै अाफना सुझाउ र सल्लाह भने दिन नभुल्नु हेाला भन्ने अाशा लिएकेा छु ।
ललितपुर जिल्लाकेा धापाखेल गाविस स्थित वडा नं. ८ मा प्राचिनकाल देखि नागदह रहेकेा जनश्रुति छ ।मन्जुश्रीले जमीन काटेर काठमाडैां उपत्यकाकेा पानी वाहिर निकाल्ने क्रममा नागदह र टैादहमामात्र पानी रहेकेा ,विरूपा भन्ने कन्याले यस दहमा अात्महत्या गर्न खेाज्दा उनीमा सैान्दर्य प्राप्त भएकेा ,मानिसले फिर्ता गर्ने सर्तमा भांडाकुंडाहरू माग्दा पाइने अादि अादि िकंवदन्ती वेाकेकेा येा दह जान सातदेावाटेा खुमलटार भएर जाने सार्वजनिक वस संचालनमा छ। अाफना निजी गाडीहरू लिएर सजिलै दहकै छेउमा पुग्न सकिन्छ ।येा दहमा हरेक वर्ष नागपन्चमी र ऋषिपन्चमीका दिन ठूलेा मेला पनि लाग्दछ । पांच कुना परेकेा येा दहकेा विशेषता भनेकेा हरेक कुनावाट हेर्दा एउटा कुना देख्न सकिन्न। जतावाट हेरे पनि चारवटा कुनामात्र देख्न सक्छैा । तपार्इ पनि दहमा पुग्दा हेा हेाइन विचार गर्नु हेला ।
हरेक वर्ष जेठ १५ देखि एक महिना सम्म पानी दहमा थुनी नागदहवाट सिंचार्इ हुने क्षेत्रहरूमा पानी छेाडिन्छ ।नागदह पहिले सिंचार्इकेा लागि पानी संकलन गर्ने र अासपासका मानिसहरूले प्रयेाग गर्ने कुरामा मात्र सिमित थियेा ।हाल दह संरक्षणाकेा लागि नागदह सुधार तथा संरक्षणा समिति वनेर त्यस क्षेत्रलार्इ पर्यटकिय हिसावले विकास गर्दै त्यसकेा संरक्षण गर्न खेाजिएकेा छ । पहिलेकेा तुलनामा नागदह निकै सफा र रमणिय देखिन्छ । दहकेा पानी सफा देखिन्छ । काठमाडैा ’round रहेका मानिसलार्इ अव काठे डुङगा चढेर अानन्दलिन पेाखरा पुगि रहनु पर्दैन । वढीमा दश जना सम्म वस्न सकिने छ वटा डुङगा समितिले संचालनमा ल्याएकेा रहेछ । एक घंटा डुङगामा सयर गरेकेा भाडा दुर्इसय र पुरै तालकेा भ्रमण गरेकेा प्रति व्यक्ति वीसरूपैया भाडा लिइदेा रहेछ ।
परिवार सहित डुङगामा सयर गर्नेहरूकेा शनिवार त भिड नै लाग्देा रहेछ । सांच्चैनै सवै कामवाट विदा लिएर एक घंटा परिवारसित निर्मल पानीकेा दहमा यात्रा गर्दा वढेा अानन्द अाएकेा कुरा डुङगा चढ्रनेहरू वतार्इ रहेका थिए ।हामी पनि काम विशेषाले केहि साथीहरू त्यहां पुगेका थियैा ।जतिसुकै चटारेा भए पनि डुङगाकेा शयर नगरि हाम्रेा मन घर फर्कनै मानेन ।
स्कुल कलेजका भाइवहिनाहरू ,युगल जेाडिहरू पनि डुङगा चढेर अानन्दलिन अाएका देखिन्थे । रिसेार्टमा रम्न चाहनेहरूकेा लागि पनि दहकेा पूर्व तर्फ र पश्चिम तर्फ दुर्इ वटा रिसेार्ट वनेका रहेछन्र ।अर्केा एउटा ठुलै रिसार्ट पनि वन्न लागेकेा रहेछ ।गहिरेा भागमा रहेकेा उक्त दहकेा चारैतिरकेा प्राकृतिक सैान्दर्य पनि मनमेाहक छ । तालकेा दक्षिण तर्फकेा भागलार्इ सिमसार क्षेत्रकेा रूपमा पनि घेाषणा गरिएकेा रहेछ यस तालमा समय समयमा सार्इवेरियावाट समेत चराहरू विचरणगर्न अाउने कुरा त्यहांका वासिन्दाहरू वताउंछन् । एकदिनकेा टुर कार्यक्म वनाएर नजिकै पर्ने सन्तानेश्वर महादेवस्थान अवलेाकन र दह घुम्न पनि सकिन्छ । त्यस क्षेत्रवाट हेर्दा हिमाल पनि मनमेाहक नै देखिन्छ ।
ताललार्इ अतिक्मणावाट रेाक्न समितिले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरसफार्इ र हरियालीनै पर्यटन क्षेत्रकेा पूर्वाधार हेा। त्यसैले हरियाली र सफा अनि विज्ञहरूवाट सुझाउ लि पर्यटनक्षेत्रकेा लागि चाहिने पूर्वाधार क्रमस गर्दै जान सके उक्त क्षेत्र पछि रमार्इलेा वन्ने निश्चित नै छ । दहकेा छेउ किनारावाट कम्तिमा तीन मिटर जग्गा छेाडि निर्माण कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरि लागू गर्न सके यसकेा भविस्य उज्वल देखिन्छ । दहकेा किनारै किनार भएर पुरै दह परिक्र मा गर्न सक्ने गरि पक्कि चार फुट जतिकेा वाटेा वनाउन सके अझ राम्रेा हुने थियेा ।त्यस ठाउंलार्इ भविस्यमा कस्तेा वनाउने हेा अहिले देखिनै येाजना वन्नु पर्छ। मैले त्यहा उत्तर तर्फ रहेकेा दक्षिण फर्केकेा पाटीमा केही वृध्दहरू घामकेा रापिलेा ताप लिएर अाराम गरि रहनु भएकेा देखेकेा थिए ।समितिले यस तर्फ पनि ध्यान दिए अझ राम्रेा हुने थियेा । सकेसम्म त्यस ठाउंमा संचालन हुने स्तरिय रिसेार्टहरू पनि त्यहिका स्थानिय वासिन्दाहरूले मात्र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गाविसले मिलाए दहकेा विकासमा अज टेवा पुग्ने थियेा । अस्तु ।
सिक्दै छु ।
नोभेम्बर 25, 2009
नया नया कुरा सीक्न मलाइ असाध्यै मनलाग्छ। त्यसैले मैले व्लग माफर्त अाफना केही कुरा लेखन खेाजि रहेकेा छु ।एकदिन छेाराले केारियावाट वावुराम भटृराइकेा व्लग हेनुर्सन भनी अनुरेाध गरे ।मैले व्लग हेरे पछि म पनि यस्तै कुराकेा खेाजिमा थिए ।त्यस दिन मलाइ ढुड०गा खेाज्दा देवता मिलेजस्तेा भयेा ।अनि तत्काल वावु छेारा अन्रलाइनमा वसि उसकेा सहयेागले मैले व्लग खेाले ।हिजेा सिक्दै गरदा वसन्त गैातमजीकेा व्लग हेर्न पाए । त्यसवाट व्लग वारे मलार्इ थप धेरै कुराकेा जानकारी भयेा । व्लग हेरी सकेपछि यस वारे अझ मैले जान्नु पर्ने कुराहरूवारे तपार्इहरूकेा सुझाउकेा अपेक्षा गर्दछु । अहिले मैले निरन्तरता दिन अलि पहिले २०४७ तिर लेखेकेा र लहर पत्रिकामा छापिएकेा कविता राख्दै छु ।
लीक छेाड्न हुन्न
भारी वेाकेकेा हेास्
या नवेाकेकेा हेास्,
छकछक् गर्दै अाइरहेकेा रेलगाडीले
लिक छेाड्न हुन्न ।
मान्छे कहलिएका हामीहरू
एउटा रेलगाडी हैां,
लिकमा हीडिरहेका हरेक मान्छेहरूले
भारी वेाकेकेा हेास…….
वाटेा जती सुकै घुमाउरेा हेास्
चाहे कठेार र अनगिन्ती किन नहेास्
ढीलेा चांडेा पुगिनै छाड्छैां
मात्र लिक छेाड्न हुन्न ।
सधै िकन िववाद
नोभेम्बर 24, 2009
यस पटक पनि वायुसेवा निगमले नया विमान खरिद गर्न लागेकेा छ। नया विमान खरिद गर्नु राम्रेा कुरा हेा ।यसकेा सवैले स्वागत पनि गरेका थिए । तर नेपालकेा इतिहासमा थाहा पाए सम्म जहाज खरिद पकृया सधै विवादमा परेकेा छ। सरकार परिवतर्न हुंदा वा जुनसुकै राजनितिक व्यवस्था अाउंदा समेत त्यहा केहि फरक परेकेा देखिदैन । पैसा देखेपछि महादेवकेा तिन नेत्र भनेझ कमिसनकै खेलले यस्तेा भएकेा हेा । कमिसनमा ठुलेा धनराशि पा्प्त हुने भएकेाले यस्तेा विवाद वारवार देाहेारिएकेा हुनुपर्छ । यस्तेा खेलमा देशका ठूला ठूला राजनेताहरू समेत विगतमा संलग्न भएका थिए । राजनितिक हस्तक्षेप पनि एउट कारणा पक्कै हेा । के त यस्तेा हुन नदिन कुनै उपाए नै छैन त। के गरदा पारदरशि हुने हेा । के कति कमिशन अाउंछ त्येा सवैनै निगमकेा केाषमा जम्मा गरेर देखाए के हेाला । देशकेा लागि विमान पनि नभै हुंदैन ।त्यसेा भए सवै मिलेर विज्ञ र राजनेताहरूले उपाए निकाल्नु अावश्यक भै सकेकेा छ । व्यक्तिले एउटा गाडी किनेर एक दुइ वर्षमा अरू गाडि जेाडछन्र । तर देशकेा सवैभन्दा पुरानेा निगम भने संधै घाटामा जानु भनेकेा लज्जा स्पद कुरा हैन र । विगतमा भए जस्तै यसपटक पनि फितार्नै नहुने गरि करेाडैा रूपैया दिइसके ।अझ संचयकेाषवाट दशैा अरव सापटि लिएर येा काम गरदै छन्र ।के अव संचयकेाषालाइ पनि डुवाउने खेल त भै रहेकेा छैन । म येा लेख माफर्त देशप् ति माया गरने सवै संग विनम् निवेदन गरदछु। अवअारयन्दा यस्तेा संधै लाजमरदेा नहुने उपाए के हेाला ।सवैले दिमाग लगाइ येा समस्याकेा समाधान गरन सके स्वाभिमानि नेपालिकेा शीर संधै नीहुरिने थिएन की ।अस्तु ।
नोभेम्बर 22, 2009
अाजकेा संसार र्इ संसार हेा । अाज म एउटा (मेरा लागि ) नयां दुनियामा पार्इला टेक्दै छु । । मैले यस व्लग माफर्त अाफना मनका कुराहरू, अाफुले समाजमा देखेका विसंगती, विकृतीहरू, साहित्यीक तथा यात्रा विवरणहरू पस्कने प्रयास नै मेरेा मुख्य काम हुनेछ । त्यसअलवा मैले देखे भेागेका कुराहरूकेा स्समरण पनि यस व्लगमा राख्ने प्रयत्न गनेर्छु । व्लग क्षेत्रमा लाग्नु भएका विज्ञहरूले सहयेग सल्लाह दिनु हुनेछ भन्ने अाशा पनि गरेकेा छु ।
You are currently browsing the manka kura blog archives for नोभेम्बर, 2009.